Oovimba bakaGoogle-Funda ukuRhweba
Iinjongo zeSamsung zokuxhasa iApple kunye neGoogle ngeKhadi layo lokuTsala eMnyhadala weFinTech
Ukuhlaziywa: 8 May 2020
Isamsung yaseMelika isandula ukuveza ukuba ehlotyeni- ngokusebenzisana nenkampani yezemali yaseMelika i-SoF- ilungiselela ukongeza "ikhadi lokuthenga kunye nenkonzo yokuphatha imali kumava eSamsung Pay." USang Ahn, uSekela Mongameli weSamsung Pay kunye noGM (North America Service Business) bathe kwingxelo yeendaba izolo "ngaphezulu kunakuqala, abathengi bathembele kwitekhnoloji ukubanceda ukuba bakwazi ukwenza njalo.
Uqhubeka echaza ukuba emva kokukhutshwa kwenkonzo ye-Samsung Pay (eyenza ukuba abasebenzisi beefowuni ezithile zeSamsung bakwazi ukuhlawula iimpahla / iinkonzo "phantse naphina apho ungaswayipha khona ikhadi") kwi2015, iSamsung nayo "yadibana kunye nabaqambi boovulindlela. ukuzisa iindlela ezintsha zokwenyani eziya kwenza kube lula ukuphatha ezona zinto zibalulekileyo ebomini. ”
Uye wathi i-Samsung ifuna ukwandisa i-Samsung Pay ukuze ibe "yindlela eyonelisayo yokulawula imali".
Uninzi lweeNkampani zamkela iNtlawulo yesiqhelo
UApple watyhila iApple Card nge-25 ka-Matshi 2019, eyikhadi letyala elaphuhliswa yiApple kwaye lanikezelwa nguGoldman Sachs. Nge-20 ka-Agasti ka-2019 iKhadi leApple laziswa eMelika
I-Techcrunch ibanga ukuba ngo-Epreli 17 ukuba uGoogle-owenza ukuba kufumaneke uGoogle Pay (inkonzo ethelekiswa ne-Apple Pay kunye ne-Samsung Pay) -kucingelwa ukuba "kudala amakhadi okutsala imali."
Njengoko besesitshilo, ngokuqinisekileyo i-Samsung ayisiyiyo eyokuqala malunga nolu hlobo kwintengiso. U-Apple usungule iKhadi le-Apple ukubuyela kwi-2019, kwaye kwangoko kulo nyaka iHuawei ikwatyhile ikhadi layo letyala, kwaye kwinyanga ephelileyo kwaxelwa ukuba into efanayo inokucwangciswa nguGoogle, nayo.
Konke oku kubonakala ngathi amashishini akasenelisekanga kuphela kukuphuhlisa iindlela zokuhlawula kwi-Intanethi nakwidijithali kwezi ntsuku. Endaweni yokuba uninzi lwazo luceba ukulandela iintlobo zentlawulo ezixhaphakileyo, kubandakanya nekhredithi kunye / okanye amakhadi etyala, ngenxa yoko kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba i-Samsung ibe yeyokuqala ukufika kuloliwe.
tags iapile, Uphando, Huawei, Samsung